Imibuzo evame ukubuzwa - iZaili Engineering Machinery Co., Ltd.
Singumkhiqizi wangempela, zaili imishini yokwakha co., Ltd. yasungulwa ngo-2012.
Ungakwazi yini ukukhiqiza ama-breakers ngokwedizayini yamakhasimende?
Yebo, insizakalo ye-OEM / ODM iyatholakala. Singabakhiqizi abangochwepheshe iminyaka engu-15 eChina.
Yini i-MOQ nemigomo yokukhokha?
MOQ 1 isethi. Ukukhokha nge-T / T, L / C, Western Union kuyamukelwa, eminye imigomo kungaxoxiswana ngayo.
Izinsuku zokusebenza eziyi-7-10 ngokumelene nenani le-oda
Mayelana Nesevisi Yokuthengisa Ngemuva Kokuthengisa
Iwaranti yezinyanga eziyi-14 yama-hydraulic breakers aphikisana nomthethosivivinywa wosuku lokulayisha. 24 ihora ngokushesha emva-sales service ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Ngabe umhlola kanjani ophula ngaphambi kokubeletha?
Yonke into ephula umfutholuketshezi izokwenza ukuhlolwa komthelela ngaphambi kokudayiswa.
Yimaphi amazwe ohlinzeka ngama-hydraulic breakers akho?
Amakhefu ethu wokubacindezela athengiswa emazweni angaphezu kwama-30 emhlabeni kubandakanya iMelika, i-Europe Australia, i-mpumalanga ye-Asia ne-Afrika.
Ngingakwazi uku-oda okokuqala ngohlobo lwami?
Yebo, sinikezela ngesevisi ye-OEM.Ungasithumela ilogo yakho noma igama lomkhiqizo, sizolikhiqiza.
Kunezando eziningana ezinamanani aphansi emakethe ezinikeza amawaranti amade. Kungani lokhu futhi unganginikeza isando esingaka?
Yebo, sinikela nangezando ezinjalo. Amawaranti amade ngokuyinhloko ayinkohliso yokuthengisa edonsa amehlo. Iwaranti enwetshiwe ivame ukuhlanganisa kuphela lezo zingxenye ngokuvamile ezingaphumeleli iminyaka eminingi noma kunjalo. Izando ezisezingeni eliphansi, hhayi ezinhle kangako zivame ukunikeza lezi ziqinisekiso ze-gimmick. Kanye namawaranti akhawulelwe ngamanani aphansi, iningi lemikhiqizo eshibhile ihaba ngamandla wesigaba se-ft lbs sezando zawo. Njengomthetho ojwayelekile onezinto eziningi, uma intengo ishibhile injalo nekhwalithi!
Konke kunokudideka. Ngidinga siphi isando? Ngifuna siphi isigaba samandla? Konke kunokudideka. Ngidinga sando sini? Ngifuna siphi isigaba samandla?
Sitshele konke mayelana nomphathi wakho, isicelo esivamile somsebenzi, amahora alindelekile okusetshenziswa ngonyaka kanye nesabelomali sakho futhi sizoncoma futhi sinciphise izinhlobo ezahlukahlukene ongakhetha kuzo.
Uma ungicaphuna ngesando kuvame ukufaka ini lokhu?
sizovame ukukucaphuna ngentengo yephakeji efaka phakathi: isando se-hydraulic, i-bit bit entsha yamathuluzi, ama-hoses amabili, amabakaki akhuphukayo, izikhonkwane zephini nezihlahla, ibhodlela le-nitrogen, amakhithi wokuvala, ikhithi yokushaja. Sizocacisa konke ngokusobala lapho sithengisa khona. Akukho okungeziwe okufihliwe.
Ngithenge isando kumthengisi othengisa zonke izinhlobo zemishini yokuhambisa umhlaba manje angilutholi usizo noma ukwesekwa. Ngenzeni?
Le yinkinga ejwayelekile. Uma ungakutholi ukwesekwa okudingayo ngoba ibhizinisi lakho elikhulu lomthengisi akusizo izando noma mhlawumbe akazazi izimpendulo zemibuzo yakho, sicela ukhululeke ukusishayela ucingo. Asikwazi ukukuqinisekisa ukuthi singakusiza, kepha uma sikwazi, sizokusiza kunoma yikuphi okusemandleni. Asinandaba ukuthi usithenge kuphi isando sakho. Uma unamathele futhi udinga usizo, vele usishayele. Awudingi ukuthenga lutho kithi ukuze uthole usizo kithi. Uma singasiza sizokwazi.
Nginesando engisithengile esetshenziswa kwenye indawo. Angiqiniseki ukuthi yiluphi uhlobo lomkhiqizo? Nginezinkinga nayo, yini engingayenza? Ngizithola kanjani izingxenye zayo? Ungangisiza?
Yebo, sishayele futhi usinike imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka. Asikwazi ukuthembisa umphumela omuhle ngaso sonke isikhathi kepha sizokwenza konke okusemandleni ukukhomba isando sakho. Sicela usithumele i-imeyili izithombe zesando sakho, kanye nezinombolo ezifakiwe kuso. Lokhu kuzosisiza ekuboneni isando sakho ngendlela efanele.
Pulverizer Ukuze Excavator, Crusher Ukuze Excavator, Shear Ukuze Excavator, Hb Series Breaker, Ukuthula Uhlobo Breaker, Isilawuli Valve Ukuze Breaker,